Thwebula Desktop Sidebar 1.05.116 beta – Vessoft
Thwebula Desktop Sidebar
Ubuso bekhompyutha Sidebar – a isofthiwe ewusizo equkethe iqoqo amawijethi ezahlukene nezimpimpi ukubonisa ulwazi kwi-desktop. Izicelo etholakala software zihlanganisa: panel of imiyalezo kanye sibonakaliso ukusebenza uhlelo, iwashi, ikhalenda, amanothi, lwendzaba njll Desktop Sidebar iqukethe iphaneli ukuhlola imeyli bese upheqa Izindaba ahlukahlukene kanye sezulu inthanethi. Isofthiwe isekela umsebenzi nabadlali amaningi yomsindo for kulalela ngokunethezeka umculo. Futhi Ubuso bekhompyutha Sidebar enabels ukusetha obala bese ushintshe isikhombimsebenzisi ngokusebenzisa izikhumba ezahlukene.
Ukufinyelela ngokushesha kwi-imeyili
Support for abadlali amaningi
Display of ukusebenza system
Ukuba khona izikhumba ezahlukene
Amazwana on Desktop Sidebar:
Desktop Sidebar Ahlobene software:
Imidlalo Isofthiwe ukushintsha izilungiselelo umdlalo bese usebenzisa CHEATS for Xbox 360 console. Isofthiwe isekela inqwaba imidlalo ethandwayo izinhlobo ezahlukene.
English, Українська, Français, Español... Spark 2.8.2
Chat Ithuluzi for imiyalezo on the internet. Isofthiwe ine imisebenzi ewusizo futhi ivumela ukuxhumana okuphephile nabasebenzisi.